21 -ka Madal ee Crowdfunding ugu sarreeya ee dhammaan Dalalka sannadka 2022 -ka
Bogga ugu weyn 21 -ka Madal ee Dad -weynaha ugu sarreeya ee loogu talagalay Dhammaan Dalalka 2022 -ka
21 -ka Madal ee Dad -weynaha ugu sarreeya ee loogu talagalay Dhammaan Dalalka 2022 -ka
Waqtigaan ka hor, lacag aruurinta bilowga ayaa ah caqabadda ugu weyn shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah wajaha xitaa fikradahooda malaayiinta ah ee ku kaydsan maskaxdooda.
Qaar yaa ilaha amaahda hay'adaha maaliyadeed waxay ku dambeeyaan dammaanad qaadka nolosha oo dhan sababtoo ah dulsaar aad u sarreeya, halka kuwa kale ee doonaya inay ammaan ahaadaan ka tanaasulaan fikradahooda iyo riyooyinkooda inay dhisaan wax weyn.
Si kastaba ha noqotee, horumarka tikniyoolajiyadda internetka, hadda waxaa jira hab aad u sahlan oo la hubo oo lacag-soo-helid-Crowdfunding ah. Waxaa jira dhowr nooc oo ah meelihii dadku ka buuxaan.
Maqaalkan, waxaan kugu soo qaadan doonnaa aaladaha kala duwan ee dadku ku badan yihiin ee dalal kala duwan oo adduunka ah.
Waa maxay Crowdfunding?
Crowdfunding waa hab lagu helo dad aad u tiro badan si ay u maal gashadaan fikraddaada halkii aad ku tiirsanaan lahayd hal qof si aad u siiso dhammaan lacagaha lagama maarmaanka ah.
Waxaad isticmaali kartaa goob dad badan oo lacag ururin ah si aad u maamusho dhammaan ururinta oo aad u hesho meel dhexe oo aad la wadaagto fikradahaaga, iyo sidoo kale agabka iyo fiidyowyada muujinaya waxa aad isku dayayso inaad qabato. Waxay qaataan boqolkiiba wax ku darsigaaga, qaarna waxay u baahan yihiin in la dejiyo ama la diiwaan geliyo.
21 Platform -yada Crowdfunding ee ugu sarreeya dhammaan Wadamada
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato aagagga dadku ku badan yihiin ee ku saabsan bartilmaameedkooda bartilmaameedka kaliya. Markaa waa kan liiska 21 -ka ugu sarreeya aaladaha dadku ku badan yihiin ee ka kala yimid qaybaha kala duwan ee adduunka.
Kickstarter waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee dadku ku uruursadaan United States of America. Asal ahaan waxaa loo yaqaanaa madal maalgelinta mashaariicda hal -abuurka ah.
Madalkan ugu sarreeya adduunka wuxuu maalgeliyaa mashaariicda la xiriira filimka, ciyaaraha, iyo muusigga farshaxanka, naqshadeynta, iyo farsamada.
Intaas waxaa sii dheer, Kickstarter waxaa ka buuxa hami, hal -abuur, iyo mala -awaal mashaariic kuwaas oo lagu soo nooleeyo taageerada tooska ah ee dadka kale.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad soo bandhigto fikraddaada ganacsi dadkuna waxay bilaabi doonaan inay gacan ka geystaan ​​sidii fikraddaas loo arki lahaa. Guji hoosta si aad wax badan uga ogaato Kickstarter.
Websiteka rasmiga ah
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Maal -geliyo Bilaabashada Saamiga Culus
Dalka: Boqortooyada Ingiriiska
CrowdCube waa mid ka mid ah Meelaha Crowdfunding ugu sarreeya ee Boqortooyada Ingiriiska. Waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah aaladaha ugu waaweyn ee la aasaasay oo leh maalgashi ka badan 1 bilyan oo yuuro.
Ujeeddada ugu weyn ee madalkani waa in dimuqraadiyadda la maalgeliyo oo la sii huriyo jiilalka soo socda ee ganacsiyada.
Nidaamku wuxuu leeyahay hannaan dadaal la'aan ah oo u oggolaanaya maalgashadayaasha inay maalgashadaan ganacsiyada kobaca sare ee ugu wanaagsan Yurub 10 euro.
Intaa waxa dheer, CrowdCube waxa ay leedahay goob sugan oo ka ilaalinaysa xogta shakhsi ahaaneed ee maalgashadayaasha khiyaanada.
Eureeca waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee lacag bixinta ee Imaaraadka Carabta. Eureeca waxay u adeegtaa sidii ikhtiyaar maalgelineed oo kale ilo maalgelin dhaqameed oo badan sida bangiyada iyo shirkadaha raasamaalka.
Madalkani waxa uu caawiyaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah in ay ka ururiyaan raasamaal koox maalgashadayaal ah.
Waxay ka ururin karaan raasamaal labadaba maal -gashadayaasha malaa'igta, iyo shirkadaha hay'adaha iyagoo ku beddelaya sinnaan.
Waqtigan xaadirka ah, madalku waxay leedahay in ka badan 25,495 maalgashadayaasha firfircoon ee ka socda 36 waddan oo leh celceliska cabbirka maalgashiga US$5,800.
#4. Wax -gooye
Imvester waa goob maalgalineed oo hanti maguurto ah oo Swiss ah oo siisa maalgashadayaasha hufnaan, badbaado, iyo maalgashi ma-guurto ah oo faa'iido leh.
Iyada oo leh Iibiyaha, waxaad ku noqon kartaa milkiilaha jajab dhisme leh qaddar macquul ah, yaraynta khataraha iyo wax kasta oo ka sarreeya adoo siinaya soo -celin soo jiidasho leh.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Helo Tigidhka Ardayga NFL Axada
Si kastaba ha ahaatee, imvester waxay haysataa maalgelinta ugu yar ee CHF 20,000 oo leh soo celinta sanadlaha ah ee 6%.
Arikovani waa madal dadweyne badan oo Turki ah oo ka caawisa ganacsatada inay helaan lacagaha ay u baahan yihiin si ay bulshada uga fuliyaan farsamooyinkooda- ama mashaariicda ku wajahan hal-abuurka.
Ujeedada ugu weyn ee madal -dadkan ugu sarreeya ayaa ah in la kordhiyo wax -soo -saarka tiknoolajiyadda gudaha ee Turkiga. Iyo sidoo kale in kor loo qaado wacyiga bulshada ee ku aaddan taageeridda wax soo saarka farsamada.
Marka la eego, waxay xalal qoto dheer u leedahay dhibaatada hantida maguurtada ah si ay u gaarto dhagaystayaasheeda oo ay u helaan maalgelinta ay u baahan yihiin.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee ku saabsan Airkovani oo dhif iyo naadir ku ah aaladaha kale ee dadku ku badan yihiin ayaa ah inay leedahay dukaan siiya macaamiisha fursad ay ku lahaadaan tiknolojiyadda ugu hal -abuurka leh qiimo faa'iido leh iyo goor hore iyagoo dalbanaya.
Iyo si aad ula kulanto maalgelinta goobtan waa inaad soo gudbisaa codsi. Codsigu waa inuu ka kooban yahay macluumaadka ku saabsan fikradaha mashruucaaga kuwaas oo la filayo inay noqdaan tignoolajiyada iyo ku jihaysan hal-abuurka, awood u leh inay la kulmaan wax soo saar ballaaran, oo loo horumariyo isticmaaleyaasha.
Iswiidhan, Tessin waxay ka mid tahay meelaha ugu sarreeya ee dadku ku badan yihiin iyada oo leh maalgelin ka badan 92,000,000 Milyan oo Euro. Waa madal iswiidhish ah oo loogu talagalay maalgashadayaasha doonaya inay lacag ku maal galiyaan fikradaha iyo mashaariicda guryaha.
Muddo sanado ah, Waxay u adeegtay sidii hab wax ku ool ah oo ay shirkaddu ku maalgeliso mashaariic cusub iyo fursad ay maal -gashadayaashu ku helaan mashaariic cusub oo xiiso leh si ay u maal -gashadaan.
Si kastaba ha noqotee, si aad u noqoto Maal -geliye Tessin, waa inaad heshaa xisaab. Koontadani waa shardi u ah inay awood u yeelato helitaanka fursadaha maalgashi ee lagu daabacay guddiga xayaysiiska Tessin.
Sidoo kale, xisaab ayaa sidoo kale loo baahan yahay si aad u dhammaystirto maalgashigaaga mid kasta oo ka mid ah mashaariicda dadka badan ee Iswidishka ee madasha.
#7. Bilowga sahaminta
Startupxplore waa dad badan oo Isbaanish ah madal premium kuwaas oo bixiya fursadaha maalgashi shirkadaha leh kartida koritaanka sare. Waxaa loo yaqaanaa bulshada ugu weyn ee bilowga ah ee Spain iyo mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon Yurub iyada oo in ka badan 9.99 milyan oo Euro lagu maalgaliyay 45 heshiis.
Asal ahaan, waxay ku xiraan shirkadaha maalgashadayaasha. Waqtigan xaadirka ah, madalkani wuxuu leeyahay in ka badan 20,964 Shirkadood oo diiwaangashan oo firfircoon iyo 51,678 maalgashadeyaal doonaya mashaariic waaweyn.
Ujeedada ugu weyn ee Startupxplore ayaa ah inay awood u siiso adeegsadeyaasheeda inay lahaadaan maal-gelin isku dheelitiran oo kala duwan oo maalgelin ah oo ku saabsan shirkadaha soo koraya ee tayada leh, iyada oo loo marayo xulashada iyo shuruudaha shaandhaynta oo aad u faahfaahsan.
#8. Uprise Afrika
Dalka: Koonfur Afrika
Uprise Africa waa goobtii ugu horreysey ee Koonfur Afrika ee horseedday sinnaan dadweyne badan, oo ku soo biirtay da 'casri iyo hal abuur leh. Mashruuca waxaa nidaamiya oo oggolaaday maamulka hab -dhaqanka qaybta maaliyadda ee Koonfur Afrika.
Markaa, iyagoo isku xira hab -nololeedka qadka tooska ah iyo kan tooska ah, waxay xoogga saari karaan kor u qaadista raasamaalka iyo maalgelinta ganacsiga. Waxay siiyaan hab kale oo meheraduhu raasamaal ugu ururiyaan Koonfur Afrika.
Kacdoon Afrika waxay u ogolaataa maalgashadayaasha adduunka oo dhan inay maalgashadaan raasamaal ganacsiyada Koonfur Afrika si ay ugu beddelaan saamiyo siman.
Waqtigan xaadirka ah, madalku wuxuu leeyahay cabbir celcelis maalgashi oo ah R 13,088.39, 67% heerka guusha, oo lagu subkay 10839 maalgashadayaal firfircoon.
OurCrowd waa madal dadweyne badan oo reer binu Israa'iil ah oo si gaar ah loogu talagalay maalgashadayaasha la aqoonsan yahay si ay u siiyaan maalgelinta raasamaalka Israel iyo kuwa caalamiga ah) bilowga raasamaalka.
In kasta oo farsamo ahaan ka baxsan liiskan Yurub, ma caawin karno laakiin waxaan xusnaa dadaallada OurCrowd si ay u shidaaliso dhaqanka bilowga Israa’iil iyada oo loo marayo maalgashadayaasha caalamiga ah, oo ay ku jiraan kuwa ka yimid Yurub.
XIDHIIDHKA: Waa maxay dhibcaha dhibcaha aad u baahan tahay si aad guri u iibsatid 2022
Waxay xubnaheeda siisaa adeegyada iyo maareynta shirkad raasamaal ganacsi, iyo sidoo kale isku -duubnaanta iyo xulashada malaa'igta maalgelinta.
Waqtigan xaadirka ah, madalku wuxuu leeyahay in ka badan 41,000 oo bilow ah oo durba leh $ 1.4B oo ay ka go'an tahay maalgelin.
#10. Maalgelinta Miisaanka
Maalgalinta lebenku waa lacagta ugu badan ee Portugal ka buuxdo waana midda ugu fiican adduunka. Waxay ku takhasustay maalgelinta (sinnaanta, amaahda, iyo crypto).
Ujeeddadooda ugu weyni waa inay ahaadaan dad badan oo maalgashanaya suuqa oo aad ka shaqayn karto dhammaan shabakadaha kale hal goob.
Goobta Bortuqiisku waa mareeg dadweyne oo dadweyne badan, oo u oggolaanaya maalgashadayaasha leh fikradaha guryaha mustaqbalka inay lacag ka ururiyaan shirkadaha waaweyn iyo shirkadaha.
Kani waa mid ka mid ah aaladaha hormuudka u ah cidhiidhiga dad -weynaha ee hal -abuurka iyo hal -abuurka, isagoo iftiiminaya dhaqdhaqaaqyada ka baxsan isbeddellada caadiga ah.
Xaqiiqda ah in ka -qaybgalayaasheeda loogu yeero "Kissbankers" ayaa si otomaatig ah u gelisa liistada goobaha si isha loogu hayo!
Madal-ku-saleysan abaal-marinta ayaa sidoo kale leh naadi lataliye, oo ka kooban shirkado, hay'ado, warbaahin, iyo magacyo mashaariic ka soo dira bulshooyinkooda oo waliba taageera mashaariicda iyagoo siinaya lacag ama aragti mashruuc.
Seedrs waa shirkad fadhigeedu yahay UK oo u soo bandhigta macaamiisheeda maalgashadayaasha iyo maal-qabeenada (VCs) oo u heelan inay maal gashadaan soo celinta sinnaanta bilowga Yurub iyo shirkadaha kale ee koritaanka. Maalgashadayaasha nooc kasta oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay maalgashi ku sameeyaan shirkadaha ay rabaan inay ka faa'iidaystaan ​​oo ay ka faa'iidaystaan.
Seedrs waxay leedahay hannaan toos ah oo toos ah oo toosin ah oo tijaabiya meheradaha jidka ku jira oo ka caawiya inay horumariyaan garoonkooda iyo fiidiyaha ololaha.
Waxay bixiyaan la-talin maalgashi, suuqgeyn, iyo kaalmada xiriirka dadweynaha, iyo xitaa lataliye sharci. Qiyaastii 1 bilyan ginni ayaa lagu kharash gareeyay in ka badan 1,260 olole taasoo ka dhalatay dadaalladooda.
Bidra AS waa hormuudka bixiyaha tiknolojiyadda maaliyadda dadweynaha iyo adeegyada (PaaS). Bidra ayaa ballaarisay si ay u noqoto mid ka mid ah bay'adaha kartida leh ee dalka xagga adeegsiga, habaynta lacag -bixinta, teknolojiyadda, iyo taageerada tifaftirka tan iyo markii la aasaasay 2014.
#14. Maalgelinta Naija
NaijaFund waa madal dadweyne fara badan oo qof walba awood siisa iyada oo u oggolaanaysa inay lacag u ururiyaan ujeedo kasta. NaijaFund waxay meesha ka saareysaa caqabadaha jireed ee taariikh ahaan lala xiriiriyay raadinta kaalmo dhaqaale dadka nolosheena.
Dadka reer Nigeria waxay la xiriiraan shabakadooda bulsheed iyagoo adeegsanaya barta internetka ee NaijaFund. Waxay codsan karaan kaalmo dhaqaale naftooda ama kuwa ay jecel yihiin.
Abuur ololahaaga lacag aruurinta oo ku xiro koontadaada bangiga processor -ka lacag -bixinta (Paystack) qeybta “Faahfaahinta Xisaabta” ee bogga “Koontadayda” si aad u bilowdo.
Kadib, adiga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada, wargeysyada, iyo xiriirada iimaylka, la wadaag ololahaaga isu -uruurinta asxaabta, xubnaha qoyska, dowladda, iyo dadweynaha guud.
MamaCrowd waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee Talyaani ee loogu talagalay maalgashiyo badan oo maalgelin ah oo u oggolaanaya maalgashadayaasha inay maalgashadaan bilowga Talyaani ee ugu wanaagsan iyo SMEs, oo leh faa'iidooyin canshuureed oo weyn.
Laga soo bilaabo 2011 ilaa maanta, madalku wuxuu lahaa in ka badan 94,895 maalgashadayaal, 19,060 xubnood oo firfircoon wuxuuna dhammaystiray 118 mashruuc.
Si kastaba ha noqotee, madalkan si kasta ha ahaato nooca maalgashadaha aad tahay, waxaa jira meel kuu taal halkan.
Companisto waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee dadka lagu ururiyo ee Jarmalka oo mudan in la aado. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah aaladaha ugu waaweyn Jarmalka oo leh ballanqaadyo maalgashi oo ka badan € 99,449,355, maalgashadayaasha 109,035, iyo wareegyada maalgelinta 179.
XIDHIIDHKA: Waa imisa Qiimaha Maaraynta Maaraynta Ganacsiga?
Laga soo bilaabo aasaaskeeda, maalgashadayaasha madal Jarmalku waxay maalgeliyeen in ka badan 100 shirkadood oo bilaw iyo korriin ah walina waa la tirinayaa.
Xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan madal-ganacsiyeedkan ayaa ah in maal-galiye ahaan, aad hesho falanqaynta maalgelinta faahfaahsan ee bilawga kasta, shabakad maalgashadayaasha kale iyo malaa'igaha, iyo xitaa inaad hesho kulan fiidiyoow toos ah oo lala yeesho aasaasayaasha bilawga kasta.
Symbid, oo la aasaasay 2011, ayaa si weyn loogu tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu horreeya ee dadku ku badan yihiin. Hadafkeedu waa in kor loo qaado hal -abuurka iyada oo la siinayo marin u helidda maalgelinta lagama maarmaanka u ah qof kasta oo ku dhiirrada inuu ka duwanaado oo raacda riyadiisa ganacsi.
Si kastaba ha noqotee, madalku wuxuu awood u siiyay ganacsato badan gaar ahaan SMEs iyaga oo siinaya raasamaal abuur. Waxa kale oo ay ka caawiyeen in ka badan 130 ganacsade maalgelinta iyada oo la soo saaray saamiyo sanadihii la soo dhaafay.
Waqtigan xaadirka ah, Symbid waxay leedahay in ka badan 55,821 maalgashadayaasha gaarka ah, 51 maalgashadayaasha xirfadlayaasha ah, iyo in ka badan 33,697,308 Euro oo la maalgeliyay.
Indiegogo waa mid ka mid ah goobaha ugu dadka badan adduunka, oo ay ka go'an tahay dimuqraadiyadda habka dadku u ururiyaan una ururiyaan lacagaha dhammaan noocyada kala duwan ee ganacsiga, oo ay ku jiraan hal-abuurka ganacsi, farshaxanka, iyo dadaallada la xiriira sababaha.
Madasha Indiegogo waxay isticmaashaa nidaam ku saleysan abaalmarin, taas oo macnaheedu yahay in deeq-bixiyeyaasha doorta inay maalgeliyaan mashruuc ay ku deeqi doonaan oo ay heli doonaan deeq halkii ay ka ahaan lahaayeen dulsaarka sinnaanta ee mashruuca.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah goobaha ugu dadka badan adduunka, ololeyaal ayaa laga bilaabaa ku dhawaad ​​waddan kasta, iyada oo malaayiin loo qaybiyo toddobaad kasta iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tabarucaadka bulshada Indiegogo.
Indiegogo wuxuu gacan ka geystey in la soo nooleeyo 800,000 mashaariic hal -abuurnimo leh in ka badan 9 milyan oo taageerayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 235 dal iyo dhulal tan iyo 2008.
Albania, Gogetfunding waa mid ka mid ah aaladaha ugu sarreeya ee dadka ka caawiya bilowga shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Si aad u isticmaasho boggan, waa inaad marka hore is -qortaa ka dibna aad dhistaa ololahaaga lacag ururinta. Si kastaba ha ahaatee, madalkani ma laha qorsheyaal tiro badan oo si guul leh loo taageeray.
Sababtaydu waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee dad -aruurinta Australiya ee dadka ku xira sababaha ay danaynayaan. Madalku wuxuu leeyahay khibrad kaa caawin karta inaad tahay maalgaliye inaad gaarto yoolalkaaga lacag ururinta.
Waxa kale oo ay bixisaa agab lacag ururineed horudhac ah oo aan xidhnayn oo qurux badan si ay uga caawiso dadka qiirada leh inay lacag u ururiyaan arrin iyaga qusaysa.
Waqtigan xaadirka ah, goobtu waxay leedahay in ka badan 6000 la -hawlgalayaal samafal, $ 140 milyan oo loo ururiyey hay'adaha samafalka Australia, 1,170,406 deeq -bixiyeyaal dhiirrigeliyay, iyo ololeyaal 242,147.
#21. La yaabay
Chuffed waa madal dadweyne oo aan macaash doon ahayn oo kaliya aqbala deeqaha aan macaash doonka ahayn, hay'adaha samafalka, ururada bulshada, mashaariicda bulshada, ama dadka u baahan, sidaa darteed wax cusub ama mashaariic farshaxan looma oggola. Qulqulka ayaa ku xaddidan 50 shuruudood, waxaadna ku taageeri kartaa arrintaada shabakadahaaga bulsheed ee kala duwan.
Si ka duwan aaladaha kale ee dadka badan lagu aruuriyo, Chuffed wuxuu dhaqaajin karaa lacagaha marka ay yimaadaan. Ma jiri doonto dib -u -dhac marka aad isku deyeyso inaad ka soo baxdo waqtiyada kama dambaysta ah ama aad gaarto xadka qaarkood ka hor intaadan helin lacagtaada.
Marka lacag la helo, waxaa lagu wareejin karaa kaarka amaahda muddo toddoba maalmood ah oo wareegsan ama koonto PayPal ah.
15 Shirkadaha Ganacsi ee Tamarta Ugu Sarreeya
Sida Loo Maal -geliyo Bilaabashada Saamiga Culus
15 Adeegga iimaylka ugu Wanaagsan ee Ganacsiga Yaryar| Hagaha Khabiirka
10ka Qalab ee ugu Wacan ee Maaraynta Mashruuca Google
Bangiyada ugu Fiican Michigan 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
15 Barnaamijyada Raadiyaha Raadiyaha ugu Fiican 2022 | Aasaasayaasha iyo Saldhigga Isticmaalaha
Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Wisconsin 2022
Heerka sare ee COVID-19, mid ka mid ah masiibooyinka masiibada ayaa ah luminta shaqooyinka iyo…
Sida Tobnaad Loo Bixiyo Marka Deynta Lagu Leeyahay | Tilmaan Buuxo iyo Talooyin
Meeltobnaadku waxa uu ahaa mid ka mid ah amarrada waajibka ah ee iimaanka Masiixiga. Waxaa la xaqiijiyay in…
Waxaan ku noolnahay duni dhijitaal ah oo aan ka geli karno barnaamijyada fariimaha ee bixiya adeeg bilaash ah oo sahlan in la isticmaalo…
15 Kaararka Deynta Ugu Fiican ee Ardayda Kulliyadda 2022 -ka
Kani waa maqaal ay tahay inaad akhrido haddii aad tahay arday aaminsan in dhammaan dhibcaha ardayga…
Waa maxay Mawduuca Cashuuraha 152? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
IRS waxay raacdaa nidaamyo iyo tilmaamo habaysan oo loogu talagalay soo-celinta cashuuraha. Kuwaas waxaa lagu diiwaangeliyay canshuur…